Feeryahanka Ruushka Habib Nur oo loo soo bandhigay $100 milyan si uu ula dagaalamo Mcgregor… – Hagaag.com
Feeryahanka Ruushka Habib Nur oo loo soo bandhigay $100 milyan si uu ula dagaalamo Mcgregor…
Posted on 6 Febraayo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Feeryahanka Ruushka Habib Nur Mammadov ayaa soo afjaray suurtagalnimada inuu mar kale uu wajaho Feeryahanka Irish-ka Connor McGregor, wuxuuna sheegay inuu haatan diirada saarayo kulankiisa soo socda oo uusan la dagaalami doonin “nacaskaasi” sida uu hadalka u dhigay xitaa haddii uu helayo $ 100 milyan.
Noor Mammadov ayaa isku diyaarinaya inuu wajaho Tony Ferguson tartanka fanka Feerka ee isku dhafka ah oo dhacaya 18-kii April ee soo socota, waxaana jiray warar sheegaya in iska hor imaadka soo socda qofkii ku guuleysta dagaalka uu wajihi doono McGregor, oo bishii hore ka adkaaday Donald Cerrone.
Warbixinnada ayaa kahadlaya dalab Sacuudi oo qiimihiisu dhan yahay 100 milyan oo dolla la siiyo Noor Mammadov, si uu ula tartamo mid ka mid ah McGregor ama Floyd Mayweather.
Si kastaba ha noqotee, Feeryahanka Ruushka oo ka jawaabaya shir jaraa’id warbixinta la sheegay ayaa yiri “Waxaan haystaa dagaal muhiim ah 18-ka April, waxaan billaabay toddobaadyo ka hor diyaar-garow adag ee ballantan, waxaana dareemayaa inaan xaalad wanaagsan ku jiro 70 maalmood ka hor dagaalkan.”
“Waxaan la yaabay markii dadku i waydiiyeen dagaal cusub oo lala galay McGregor, waxay umuuqataa inay rabaan sii wadida showgii ay arkeen wixii ka dambeeyay iskahorimaadkii hore,” ayuu yiri, isaga oo tixraacaya iskahorimaadkii ka dhex dhacay xubnaha labada koox taas oo sababtay in Feeryahanada lagu soo rogo cunaqabateyn.
“Qof walba wuu arkay wixii ka dhacay iskahorimaadkii hore, waan xakameynayay iskahorimaadka waxaanan sameeyay wax walba oo aan doonayay inaan sameeyo. Wuu isa soo dhiibay, sideen ugala hadli karnaa ku soo celinta dagaalkaasi? Micno masameyneyso inaan waajaho nacaskaasi mar kale si aan u helo $ 100 milyan.”